Best Hot Pot Award (၂)ကြိမ်တောင်ရထားတဲ့ “DIY Hot Pot” က ဆိုင်ခွဲအသစ်ဖွင့်လိုက်ပြီနော် – FoodiesNavi
Best Hot Pot Award (၂)ကြိမ်တောင်ရထားတဲ့ “DIY Hot Pot” က ဆိုင်ခွဲအသစ်ဖွင့်လိုက်ပြီနော်
By yin sandi On June 12, 2018 0
မိုးအေးအေးလေးက ဖီးလ်လို့ကောင်းသလို အစားအသောက်တွေကိုလည်း အရသာခံလို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိုးအေးအေးမှာ စားလို့အကောင်းဆုံးက ဟော့ပေါ့ဆိုရင် အစားတစ်လိုင်းတို့သဘောတူကြည်ဖြူကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကဲ…အစားတစ်လိုင်းတို့ရေ ဟော့ပေါ့ထဲမှာဆိုရင်ရော ဘယ်ဆိုင်လေးကိုအကြိုက်ဆုံးလဲဝေ့ ? မင်မင်ကတော့ Best Hot Pot Awards ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်ရော ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာပါရရှိထားတဲ့ ” DIY ” ဟော့ပေါ့လေးကိုအကြိုက်ဆုံးပါပဲ ? ? ဟော့ပေါ့ကြိုက်တဲ့အစားတစ်လိုင်းတို့လည်း ဒီဆိုင်လေးကို စားဖူးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။
” DIY ” ဟော့ပေါ့ကိုအရင်တုန်းက ဝေဇယန္တာလမ်းပေါ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတာကိုသိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။ အခုဆိုရင်တော့ အောင်မြင်မှုခြေတစ်လှမ်းထပ်လှမ်းတဲ့အနေနဲ့ Downtown Branch အလုံဆိုင်ခွဲကို ဇွန်လ(၁၂)ရက်နေ့ကစပြီး Soft Opening ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အစားတစ်လိုင်းတို့အတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းလေးကတော့ Soft Opening စဖွင့်တဲ့နေ့ကစပြီး Grand Opening မဖွင့်ခင်အချိန်အထိ Food Only (၃၀%) Off နဲ့သွားရောက်စားသုံးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ?
ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကို လုံးဝလက်လွှတ်မခံနဲ့နော် ? ဟော့ပေါ့အသည်းစွဲဘော်ဒါတွေလိုက်စုပြီး တူတူသွားစားရင်တော့ ပိုလို့ပျော်စရာကောင်းမှာပဲနော် ? Grand Opening ဘယ်နေ့လဲအက်မင်လည်းမသိတော့ အချိန်မီအောင်စောစောစီးစီး ကြေညာမောင်းခတ်လိုက်တာပါ ? အသစ်ဖွင့်မယ့်ဆိုင်လေးမှာပဲ ၃၀% ရမှာနော်အစားတစ်လိုင်းတို့ရေ ? ဆိုင်သစ်ရဲ့လိပ်စာလေးကတော့ အမှတ်(၂၀၄) ၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမပေါ် ၊ သစ်တောလမ်းနှင့်အလုံလမ်းကြား ၊ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရှေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ နေ့လည်(၁၁)နာရီကနေ ည(၁၁)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source: www.facebook.com/diyhotpot
ဘာပဲဝယ်ဝယ် Bill စာရွက်လေးကို ပြန်စစ်ကြည့်စေချင်…..
ကရင်ရိုးရာအစားအစာတွေကို ကရင်လက်ရာစစ်စစ်နဲ့ ရန်ကုန်မှာတင်စားလို့ရပါပြီ